Barca Oo Dooneysa Xiddig Uu Nacay Mourinho Iyo TOBANKA War... - Axadle | Wararka Maanta – The one stop destination for Somalia
Barca Oo Dooneysa Xiddig Uu Nacay Mourinho Iyo TOBANKA War…
By jojo On Mar 26, 2020
Inkastoo xilli ciyaareedka kubada cagta Yurub uu hakad ku jiro, taasi lama micno ahan in wararka xanta suuqa kala iibsiga ay joogsanayaan.
Shabakada Laacib waxay idiin soo gudbineysaa 10ka war ee ugu waa weyn suuqa kala iibsiga Maanta Oo Khamiis ah.
Sida ay sheegeyso jariirada Mundo Deportivo, Barcelona ayaa dooneysa inay la soo wareegto xiddig cusub oo khadka dhexe ah si ay ugu buuxiso boosaska ay baneynayaan Arturo Vidal iyo Ivan Rakitic. Xiddiga diirada u saaran waa Tanguy Ndombele kaasoo u muuqda inay isku dhaceen tababaraha Tottenham Jose Mourinho.
Wargeyska TuttoSport ayaa ku waramaya in Inter Milan ay u soo bandhigtay Olivier Giroud heshiis seddex sannadood ah oo uu ugu wareegayo San Siro. 33 jirkaan weerarka ka ciyaara oo haatan la jooga Chelsea ayaa sidoo kale dalab qandaraas kordhin hal sanno ah ka heysta Blues.
Sida ay sheegtay jariirada London Evening Standard, wadahadalo ayaa u dhaxeeya Arsenal iyo Real Madrid oo ku saabsan sidii xilli ciyaareed kale loogu kordhin lahaa heshiiska amaahda ee uu Dani Ceballos ku joogo Emirates Stadium.
Juventus oo baadigoob ugu jirta daafac bidix ayaa diyaar u ah inay 30 milyan euro kula soo wareegto xiddiga Chelsea Emerson Palmieri sida ay sheegtay Calciomercato. Si kastaba, weli ma aysan bilaabanin wadahadalada labada kooxood.
Qandaraaska Carlos Tevez ee Boca Juniors ayaa dhacaya bisha Juun iyadoo kooxda reer Argentina ay dooneyso inay u dheereyso. Sida ay sheegtay CNN Deportes, Boca ayaa heshiis cusub oo hal sanno ah u bandhigeysa weeraryahanka taasoo la micno ah in mushaharkiisana hoos loo dhigayo.
Marc Cucurella iyo Nicolas Tagliagfico ayaa ah labada daafac bidix ee ku jira liiska xiddigaha uu doonayo Frank Lampard sida ay qortay jariirada Daily Express. Getafe ayaa dhawaan si joogta ah kula wareegtay Cucurella oo ay ka bixiyeen lix milyan euro, waxaa sidoo kale xiiseyneysa FC Porto.
Wargeyska Birmingham Mail ayaa ku waramaya in Aston Villa ay xiiseyneyso inay Napoli kala soo wareegto Jose Callejon. Qandaraaska xiddiga garabka ka ciyaara ee Napoli ayaa dhacaya bisha Juun, waxaana uu Pepe Reina kula midoobi karaa garoonka Villa Park.
Sida ay sheegtay jariirada Independent, Manchester United ayaa hogaamineysa tartanka loogu jiro saxiixa Jadon Sancho, waxayna diyaar u yihiin inay 120 milyan euro kula soo wareegaan 20 jirkaan.
Eberechi Eze ayaa ka mid ah xiddigaha diirada u saaran Tottenham xagaagan laakiin sida ay sheegtay Daily Express diyaar uma ahan inay bixiyaan 20ka milyan euro ee ay QPR duldhigtay 21 jirkaan.
Sida ay sheegtay jariirada Jarmalka ee Bild, Bayern Munich ayaa dooneysa inay David Alaba ka qeyb dhigto heshiiska ay Manchester City kala soo wareegayaan Leroy Sane. Si kastaba daafaca bidix ayaan dooneynin inuu u wareego Premier League isagoo ka doorbidaya inuu ku biiro kooxaha Spain.
jojo 791 posts